Sọftụwia - Akụrụngwa Akụkọ | Akụrụngwa Akụkọ (Peeji nke 2)
Kedu weebụsaịtị ndị nwere trackers ndị ọzọ
Ndị trackers dị na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ibe weebụ niile bụ ọrụ maka ịmara ihe masịrị anyị na ihe ndị anyị chọrọ. Iji VPN bụ naanị ihe ngwọta iji zere ya.
Etu ị ga-esi weghachite faịlụ Okwu ehichapụ
Findingchọtaghị faịlụ dị na kọmpụta anyị nwere ike ịbụ ihe mbido ma ọ bụrụ na anyị esoghị usoro ndị anyị gosiri gị n'isiokwu a ka ị nwee ike ịgbake ya ngwa ngwa.
Etu ị ga-esi weghachite faịlụ Excel ehichapụ
Ọ bụrụ na anyị nwere nsogbu nke ida faịlụ Excel, n'isiokwu a anyị na-egosi gị nhọrọ niile dị iji nwee ike ịgbake ya nke ọma.
Otu esi ewepu adware
Chọpụta ihe adware bụ na otu anyị nwere ike isi wepụ ya na kọmputa ma ọ bụ ekwentị anyị oge ọ bụla iji zere nsogbu.
MacOS Catalina dị ugbu a: gini bụ ihe ọhụrụ na otu esi etinye ya
Ọ bụrụ n'ịchọrọ imelite na MacOS Catalina ozugbo enwere ike, ị kwesiri iburu n'uche na enwere ụzọ abụọ iji mee nke a: otu ngwa ngwa na nke nwayọ
Yuka, na mobile ngwa na-enye ohere ka anyị nyochaa ihe oriri na ntecha
Ekele maka ngwa Yuka, anyị nwere ike nyochaa ngwa ngwa nke ogo ngwaahịa anyị nwere n'ụlọ ma ọ bụ na anyị bu n'obi ịzụta
Mailrelay: Ngwaọrụ iji mepụta mkpọsa email gị
Chọpụta ihe banyere Mailrelay, ngwa ọrụ nke ị nwere ike ịmepụta ma jikwaa ahịa ahịa email na akwụkwọ akụkọ maka ụlọ ọrụ gị.
EaseUS Data Recovery Wizard Pro: Usoro kachasị mma iji weghachite data furu efu
Chọpụta karịa EaseUS Data Recovery Wizard Pro, mmemme kachasị mma iji weghachite data na kọmputa gị. Kedụ ka ị ga - esi nweta ya?
Otu esi eweghachi igodo Hotmail nke abanyela
Microsoft na-enye ụzọ ziri ezi iji nwetaghachi paswọọdụ Hotmail ma ọ bụrụ na egboro ya na onye ọrụ gị enweghị ike ịbanye ịgbanwe ya.
Budata mmemme iji chepụta t-shirts
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịme akwa nke gị ma ọ bụ chọọ ị nweta uwe nke gị, enwere mmemme na-enye ...
Idphoto4you na-ebelata nha foto maka Passport ọnlaịnụ
Na-emefughi ego, ịnwere ike iwe foto foto nke paspọtụ dabere na mba na ndepụta nke ...
Aghụghọ iji nweta ọtụtụ ihe na Spotify na ama gị
Chọpụta usoro aghụghọ a nke ị nwere ike iji nweta ngwa ngwa Spotify na ama gị. Spotify aghụghọ maka gam akporo.
Etu esi edegara PDF
Ide ihe na PDF bụ usoro dị mfe. Chọpụta ngwa kacha mma maka ekwentị mkpanaaka na kọmputa iji dezie ma dee akwụkwọ PDF.
Recoverit Free: Kacha mma software naghachi ehichapụ data
Chọpụta ihe banyere Recoverit, mmemme kachasị mma na ahịa iji weghachite data ehichapụ na kọmputa gị n'ụzọ dị mfe na n'efu.
dr.fone: The ngwá ọrụ nyefee na weghachi WhatsApp na iOS na gam akporo
Chọpụta ihe banyere dr.fone, na ngwá ọrụ na-enye gị ohere nyefee, weghachi ma ọ bụ detuo WhatsApp chats n'etiti gam akporo na iOS ekwentị.
Etu esi mepụta akwụkwọ PDF
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmepụta PDF akwụkwọ, naanị ị ga-agbaso usoro niile anyị gosipụtara gị na nkuzi a.
Esi mpikota onu PDF
Chọpụta ụzọ niile iji mpikota PDF na kọmputa gị, site na ibe weebụ Adobe Acrobat Pro iji hụchalụ na Mac.
Ndepụta nke sava Emule 2021 emelitere na sava zuru ezu. Chọpụta otu esi eme ka emelitere gị emelitere na-akpaghị aka ma ọ bụ jiri aka rụọ ọrụ.
Etu ị ga-esi hapụ ohere na iCloud
Ọ bụrụ na ị chọrọ inweta free ohere na gị iCloud akaụntụ na-enweghị na-amanye iku ọzọ ohere, ebe a bụ ụfọdụ Atụmatụ iji nweta ya.
Etu esi ewepu faịlụ rar
Ọ bụrụ na ị na-achọ ngwa iji mepee faịlụ gị na usoro RAR na PC, Mac, iPhone ma ọ bụ gam akporo gị, mgbe ahụ anyị ga-egosi gị ndị kachasị mma.
Etu esi agbagharị vidiyo na VLC
VLC bụ otu n'ime egwuregwu kachasị mma anyị nwere taa maka ikpo okwu ọ bụla, ebe ọ bụ na ...
Otu esi eme ihe ederede
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịma otu esi emepụtaghachi akwụkwọ ekwentị gị, kọmpụta ma ọ bụ mbadamba, n’isiokwu a anyị na-enye gị usoro niile dị.
Esi esi PDF gaa JPG
Ingga site na PDF gaa na JPG bu usoro di mfe nke n’amaghi acho omuma di omimi banyere ya. N’isiokwu a anyị gosiri gị otu esi eme ya.
Etu ibudata vidiyo YouTube na-enweghị mmemme
Iji budata vidiyo ọ bụla na YouTube, ọ dịghị mkpa iji ngwa nke atọ ọ bụla, ebe ọ bụ na anyị nwere ike ime ya site na ihe nchọgharị anyị
Kedu ihe bụ Google Drive
Ọ bụrụ na ịmaghi ihe Google Drive bụ, n'isiokwu a anyị na-egosi gị ihe ọ bụ, ihe ọ bụ maka na ihe niile ị nwere ike iji ya mee.
Huawei mara ọkwa EMUI 9.0, mmelite kasịnụ na sistemụ arụmọrụ gam akporo ya
Chineselọ ọrụ China na-aga n'ihu na-n'etiti ndị na-eduga ụwa na ụbọchị ole na ole gara aga ọ kọwapụtara Apple site na nke abụọ ...
Esi arụkwa nchekwa folda Outlook
Chọpụta otu esi arụkwa Igbe mbata Outlook gị ma ọ bụrụ na imeghe ya na njehie metụtara faịlụ PST na nchekwa data.
Oge mgbakwunye Firefox ochie nwere ụbọchị mmebi
Mwepụta nke Firefox Quantum, mmezi ọhụụ kachasị ọhụrụ nke ihe nchọgharị Mozilla Foundation, kụrụ ahịa n'afọ gara aga, ya na The Mozilla Foundation, nke nwere ihe nchọgharị Firefox, ka wepụtara nkwupụta na-ekwupụta ụbọchị njedebe nke ndọtị ochie.
Etu esi etinye ma jikwaa gburugburu na Google Chrome
N'ihe banyere ịhazi ihe nchọgharị anyị, Google Chrome bụ naanị ihe nchọgharị na-enye anyị ohere ịme ya, ọbụlagodi na agba ndị ọzọ karịa Installwụnye na ijikwa isiokwu na Google Chrome iji hazie ihe nchọgharị anyị bụ usoro dị mfe anyị na-akọwa n'okpuru.
Bose QC35II enweworị nkwado maka Alexa
Bose QC35II enweela nkwado maka Alexa. Chọpụta karịa banyere ekweisi ndị a nwere ike iji enyemaka Amazon ugbu a
Ekwentị gị, ngwa iji nweta Microsoft iOS ma ọ bụ gam akporo Microsoft dị na ya ga-ada n'ahịa
Na ogbako ikpeazụ maka ndị mmepe Microsoft, ụlọ ọrụ ahụ kwupụtara, na mgbakwunye na akụkọ dịgasị iche iche metụtara ndị otu a, ...
Ha mepụtara ngwanrọ nke nwere ike ịma ihe ị na-eche
Otu ìgwè ndị nyocha si Kamitani Lab nke Mahadum Kyoto jisiri ike wepụta sọftụwia nwere ike ịmara ihe ị na-eche.
Cloud Music Player: Play free music na gị iPhone si ígwé ojii
Cloud Music Player: Gee egwu n'efu na igwe ojii na iPhone. Chọpụta ihe banyere egwu egwu a maka iPhone ma ọ bụ iPad.
Ọnọdụ gbara ọchịchịrị dị ugbu a na Outlook. Anyị na-egosi gị otu esi arụ ọrụ
Dabere n’otú i si eji kọmputa gị, ma ọ bụ n’ehihie ma ọ bụ n’abalị, tinyere ọnọdụ ọkụ ndị gbara ya gburugburu, o yikarịrị ka ọrụ ozi Microsoft, bụ Outlook, ka natara ihe ọhụrụ nke ọtụtụ ndị ọrụ ga-enwe ekele maka ya: ọnọdụ gbara ọchịchịrị. Anyị na-egosi gị otu esi arụ ọrụ.
AI ohuru nke Google ga enyere aka mezie ndudue asusu
Versiondị Google AI a nke a ga - ewepụta maka akwụkwọ Google, ga - enye ndị ọrụ ohere imezi ...
Firefox ga-emechi ụda vidiyo nke na-egwu na-akpaghị aka
O doro anya na ihe karịrị otu oge, ị nwere ezigbo ụjọ mgbe ị hụrụ otú ụda dị omimi si malite ịpụta site na ndị na-ekwu okwu gị, na-enweghị Mmelite na-esote nke ihe nchọgharị Firefox nke Mozilla agaghị arụ ọrụ vidiyo nke weebụsaịtị ndị anyị gara. ndị nwere ụda arụ ọrụ.
Esi gbanwee ahịrị site na kọlụm na Microsoft Excel
Mgbe ị na-eme ụdị eserese ọ bụla (dabere na data agbanwe), ọnụọgụ puru omume, nyocha, nyocha n'etiti akwụkwọ dị iche iche, chọọ Ọ bụrụ na ị na-eche mgbe niile ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịgbanwe ahịrị maka kọlụm na mpempe akwụkwọ, azịza ya bụ ee ma anyị na-agwa gị otu esi mee ya.
Etu esi gbanwee ọnọdụ nke folda nbudata na Google Chrome
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, Google Chrome abụrụla ihe nchọgharị kachasị eji eme ihe n'ụwa, na nyiwe gam akporo (arụnyere ya n'ụzọ) nginggbanwe ọnọdụ nke folda nbudata na Google Chrome anyị bụ usoro dị mfe anyị kọwara n'ụzọ zuru ezu Akụkọ a.
Amamịghe echiche na-abịa n'ichepụta ọgwụ ọhụrụ
Otu ndi okacha amara nke MIT jisiri ike weputa oria amamịghe nke nwere ike igba ogwu ohuru.
Rampage, a dị egwu ahụhụ na-emetụta ihe niile gam akporo arụpụtara mgbe 2012
Otu ìgwè ndị na-eme nchọpụta ekpughere ihe a maara dị ka RAMpage, njigide nwere ike iji nsogbu na-emetụta ngwaọrụ Andorid.
Emebere Instagram Lite n'ọtụtụ mba
Anyị nọ n'etiti oge ọkọchị na ị dataụ data nke ngwaọrụ anyị na-abawanye ma ọ bụ ọbụlagodi ihe mgbagwoju anya dabere na ...
Nvidia nwere ike ịkpọ vidiyo ọ bụla na 'Slow Motion'
Nvidia na-egosi ọha na eze ọgụgụ isi ọhụrụ ya nwere ike ịkpọ ụdị vidiyo ọ bụla na Slow Motion.
Android emulator Andy nwere ike ịwụnye ngwanrọ ngwanrọ cryptocurrency
Gam akporo emulator Andy na-etinye sọftụwia ngwanrọ na kọmputa niile ebe a na-etinye ya, ọ bụ ezie na onye nrụpụta gọrọ ya
Nintendo Gbanye ga-enye gị ohere ịnụ ụtọ Netflix na YouTube n'oge na-adịghị anya
Dị ka ọhụụ ọhụrụ si dị, ma Netflix na YouTube nwere ike ịbịaru Nintendo Switch n'oge na-adịghị anya.
Chrome agaghị ekwe ka ntinye nke mgbakwunye site na mpụga Chrome Web Store
Mgbakwunye bụ otu n'ime ihe kachasị mma nchọgharị natara n'afọ ndị na-adịbeghị anya, ọ bụ ezie na ụmụ okorobịa ...
Apple na-edozi nsogbu nchekwa macOS afọ 11
Apple ka kwuputara na ha mechara dozie nsogbu nchekwa siri ike nke dị na macOS kemgbe ihe karịrị afọ 11.
Ndị a bụ ụkpụrụ ụkpụrụ omume nke Google ga-eji mepụta usoro ọgụgụ isi ya
Google ka kwuputara mmejuputa atumatu oru ohuru nke ha gha agbaso mgbe ha na emeputa amamịghe.
Akụkọ niile dị na macOS Mojave
N'ebe a, anyị na-egosi gị akụkọ niile ga-esite n'aka nsụgharị macOS na-esote, baptizim dị ka Mojave.
Achọpụtala ịba uru na ngwa ngwa desktọọpụ Steam nke dịla kemgbe afọ 10 gara aga
Site n'enyemaka nke ọkachamara n'ihe banyere nchekwa kọmputa Tom Court, a edozila nsogbu dị egwu na Steam kọmputa ahịa, bụ nke Valve mechara dozie ya ọnwa ole na ole gara aga.
Microsoft na-azọrọ na Windows 10 achọghị antivirus ọ bụla
Mgbe ọ hụrụ otú ule AVTEST si kwenye na Windows Defender bụ ngwọta antivirus kasị mma n'ahịa, ụlọ ọrụ ahụ gosipụtara ya site na blọọgụ ya.
Na-achọ ọrụ? Google weputara igwe nchoputa oru ya na Spain
Ọ bụ eziokwu na n'oge a ọ dị mfe ịchọta ọrụ n'ihi mgbake akụ na ụba nke mba ahụ, mana na ...
Ndị ọzọ kachasị mma na Instapaper, ugbu a ọ kwụsịrị ịrụ ọrụ na Europe
Ozugbo ị mechiri ọrụ iji chekwaa weebụsaịtị ị ga-agụ mgbe Instapaper gasịrị, n'isiokwu a anyị na-egosi gị usoro nke ihe ndị ọzọ dị mma.
Starbucks karịrị Apple Pay, Google Pay na Samsung Pay na ịkwụ ụgwọ ekwentị
Starbucks mobile ịkwụ ụgwọ ngwa bụ a hit na America. Chọpụta ihe banyere ịga nke ọma nke kọfị yinye ngwa na America.
Google Duo na-eweta nkesa ihuenyo na gam akporo
Google Duo ga-eji nkesa ihuenyo na gam akporo. Chọpụta ihe banyere atụmatụ ọhụrụ na-abịa na gam akporo ngwaọrụ na ngwa ọkpụkpọ vidiyo.
Etu esi ewunye mgbakwunye na Google Chrome
Ndọtị ndị ejiri zuo oke maka ihe nchọgharị ọ bụla. Ọ bụrụ n ’ikpebibeghị ịnwale ndọtị na ihe nchọgharị kachasị ewu ewu na ahịa, n’okpuru anyị ga-egosi gị otu esi etinye ngwa na Google Chrome.
Ihe PGP izo ya ezo nwere nsogbu, email abughizi uzo nkwurita okwu
Otu ìgwè ndị na-eme nchọpụta jisiri ike chọpụta nnukwu nsogbu dị n'ime algorithms algorithms a na-ejikarị na gburugburu ụwa.
Uzo ndi ozo kacha mma na PowerPoint
Na-achọ ndị ọzọ maka PowerPoint? Ndị a bụ nhọrọ kachasị mma iji mee ihe ngosi na ntanetị ma ọ bụ n'efu na kọmputa gị.
N'ihi mmata ihu ha na India ha jisiri ike chọta ụmụaka efu furu efu n'ime ụbọchị anọ
Otu nzukọ dị n'India jisiri ike wepụta ihu ihu ihu igwe nwere ike ịchọta ụmụaka furu efu. N’oge a na-anya ndị ọkwọ ụgbọelu, ihe fọrọ obere ka ọ bụrụ ụmụaka 3.000 ka a hụrụ n’ime ihe na-erughị ụbọchị anọ.
Chrome dị nwayọ nwayọ, etu esi bidogharịa ya
Ọ bụrụ na ihe nchọgharị Chrome nke Google amalitela igosi ihe mgbaàmà nke ike ọgwụgwụ, ọ nwere ike ịbụ oge nhicha. Ọzọ anyị na-enye gị obere nkuzi ebe anyị na-egosi gị ihe ị ga-eme mgbe Chrome dị nwayọ nwayọ.
Firefox ga-ebido igosipụta mgbasa ozi na ụdị nke ọzọ mgbe anyị mepere taabụ ọhụrụ
Mozilla Foundation ka kwupụtara na ụdị nke nchọgharị Firefox ọzọ ga-amalite igosi mgbasa ozi oge ọ bụla anyị mepere taabụ ọhụrụ.
Ihe nchedo Twitter na-adụ anyị ọdụ ka anyị gbanwee okwuntughe
O yiri ka ọ dịghị onye ọ bụla nwere nsogbu pụọ na nsogbu metụtara nchekwa paswọọdụ na nke a ...
Opera Touch, ihe nchọgharị weebụ na mkpanaka ị nwere ike iji otu aka
Opera Touch bụ ihe nchọgharị ọhụụ nke ụlọ ọrụ ga-enye gị ohere ijikwa naanị otu aka. N'oge ọ bụ naanị maka gam akporo
Etu esi choo tab Chrome niile
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịchọ okwu n'etiti taabụ niile mepere emepe na ihe nchọgharị Chrome anyị, anyị ga-eji ndọtị a na-akpọ Search Plus.
N'ihi NVIDIA ị gaghịzi achọ ịbụ ọkachamara PhotoShop iji gbanwee ihe onyonyo dịka pro
NVIDIA na-egosi anyị nsonaazụ mbụ nke sọftụwia ya nwere ike ịgbanwe ihe oyiyi kpamkpam na-akpaghị aka, ihe ga-eme ka ị ghara ịchọ ịma etu esi edozi PhotoShop dị ka ọkachamara.
WhatsApp ga-enyere anyị aka ibudata otu data anyị
WhatsApp na-agbanwe usoro ohuru nke ga-amalite na May 25 na Europe dum. Maka nke a, ọ ga - enye onye ọrụ ohere ibudata nnomi zuru oke nke data ha niile
Nintendo Switch emesiri hacked na ọ dịghị onye nwere ike idozi ya
Otu abụọ raara nye mmepe nke ịkpa ike dị ka FailOverflow na ReSwitched jisiri ike mbanye na Nintendo Switch na-eji ohere nke nsogbu na sọftụwia nke Nvidia Tegra X1, ọdịda nke enweghị ike idozi Nintendo n'onwe ya.
Nkata: Ọhụrụ Google ọhụrụ na WhatsApp
Nkata: Ngwa ọhụụ izipu ozi Google. Chọpụta ihe banyere ngwa izipu ozi ọhụụ nke ụlọ ọrụ ahụ ga-ebupụta n'ahịa n'oge na-adịghị anya.
Microsoft weputara ndọtị Windows Defender maka Chrome
Guysmụ okorobịa si Redmond amalitela ndọtị ọhụụ maka ihe nchọgharị Chrome nke ọ na-enye ndị ọrụ ihe nchọgharị a ohere ịnụ ụtọ Windows Defender
The kacha mma paswọọdụ oru
Na-achọ onye njikwa okwuntughe kacha mma? Tinye na-achọpụta na 5 kasị mma na-okwuntughe gị mma ma mekọrịta n'etiti ngwaọrụ.
Google na-anwale uzo mkpirisi na Chrome ide Emojis
Google na aru oru ka igha ede emojis ma obu emoticons na Google Chrome n'uzo di nfe. Can nwere ike ịnwale ya ugbu a site na Google Chrome Canary
Beta beta na-enye gị ohere ile vidiyo YouTube na-ahapụghị ngwa ahụ
Nke a bụ ihe ndị ọrụ nke ngwa ngwa a na-arịọ kemgbe, ugbu a na ...
Onye ị na - akpọtụrụ 'na-ede' mana ozi ahụ anaghị abịarute.
Ntinye ebe anyị ga-enyocha ihe na-eme na akara 'ntinye' nke na-egosi na ngwa izipu ozi ngwa ngwa mgbe kọntaktị dere ozi.
Nhazi ga-egosi ndepụta anyị ọzọ n'usoro oge
Maka oge nke iri na asatọ, ebe Facebook zụtara Instagram, netwọkụ mmekọrịta foto ga-agbanwe algorithm nri ọzọ, na-enye anyị ohere igosipụta ọdịnaya ahụ n'usoro oge.
Dị ọzọ nke Windows 10 ga-emeghe njikọ njikọta site na Microsoft Edge
Otu n'ime ọrụ ọhụrụ Microsoft na-anwale maka ụdị nke Windows 10 n'ọdịnihu, anyị na-ahụ ya na ọrụ ịmepe njikọ Mail naanị na Microsoft Edge
Unsubscriber, ụzọ kachasị mfe iji kpochapụ spam
You chọrọ tufuo ndị manụ na ndenye aha gị email? Unsubscriber bụ ọrụ n'efu nke ga - enyere gị aka site na mbido
Microsoft na-enye ohere ka Windows 10 rụọ ọrụ n'efu
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ime ka Windows 10 gị rụọ ọrụ n’efu, n’ụbọchị ndị a ị nwere ohere ịme ya ọzọ n’agaghị eji otu euro.
Onye kere abụ: ngwa ọrụ ọhụụ nke Google iji mepụta egwu gị
Onye kere abụ: ngwa ọrụ ọhụụ nke Google iji mepụta egwu gị. Chọpụta ihe banyere ngwá ọrụ a nke na-enye gị ohere ịmepụta egwu.
WhatsApp ga-enye gị ohere ihichapụ ozi ezigara karịa otu awa gara aga
WhatsApp maka gam akporo ga-enweta mmelite ohuru nke anyị ga-ahụ ezigbo mmelite dị mkpa maka oge ihichapụ ozi.
Movavi: Ndị editọ foto na vidiyo kacha zuo ezu maka Windows na Mac
Movavi: Ndị editọ foto na vidiyo kacha ezu maka Windows na Mac. Chọpụta karịa gbasara ndị editọ a ga-eme ka edezi foto ma ọ bụ vidiyo dị mfe ma nye anyị ọtụtụ nhọrọ.
Ahụ igodo Swype a ma ama maka ama agaghị emelitere ya
Ihe keyboard a ma ama Swype agaghị enweta mmelite ọzọ na ndị mmepe wepụrụ ya na ụlọ ahịa ngwa Apple na Google.
Chuletator na uzo ozo ndi ozo iji mee ibe
Mmadu adighi ebi nani Chuletator. N’isiokwu a anyị gosiri gị ihe ndị ọzọ kachasị mma anyị nwere ike ịchọta na tontanetị iji mee ibe n'ibe ga-enyere anyị aka ịgafe ule n'agụghị akwụkwọ.
Usoro ọgụgụ isi nke Google nwere ike dee ederede Wikipedia n'ụzọ kwụ ọtọ
Ndị injinia Google jisiri ike kwadebe usoro ọgụgụ isi ha nke nwere ikike zuru oke ka sọftụwia a nwee ike ịde ederede Wikipedia n'ụzọ kwụ ọtọ.
Microsoft na-ehichapụ Storelọ Ahịa Microsoft, na-ehichapụ ngwa niile na-eji aha Windows
Microsoft ebidola ihichapụ ngwa niile gosipụtara Windows na aha ha ma ọ bụ nkọwa ha, iji gbochie ha iduhie.
Pixabay weputara ngwaọrụ abuo maka Photoshop na Microsoft Office
Pixabay ewepụtala ngwaọrụ abụọ ga - ejikọ ọnụ na Adobe Photoshop na Microsoft Office iji nye ahụmịhe ọrụ dị nro
Microsoft Photos Companion, ụzọ kachasị mfe iji nyefee foto site na mkpanaka gị na PC gị
Microsoft amalitela ngwa ọhụrụ maka gam akporo na iOS iji nyefee foto site na ekwentị mkpanaaka ma ọ bụ mbadamba na Windows 10 ọsọ ọsọ na agile.
Etu ị ga - esi nwetaghachi bọtịnụ «Lee onyonyo» na Google Chrome na Firefox
Ekele maka ndọtị Google Chrome, awa 24 mgbe o wepụsịrị onyonyo onyonyo si na ọchụchọ onyonyo, anyị nwere ike ịgbake.
Google na akowa otu Chrome si ad blocker ad ohuru
Ntinye ebe anyị ga-ekwu maka otu, dị ka Google n'onwe ya kọwara, ad blocker na ha tinyebere n'ime ihe nchọgharị Chrome na-arụ ọrụ
Fedora nwere ihe ngwọta iji nwekwuo arụmọrụ batrị laptọọpụ gị site na 30%
Otu ìgwè ndị mmepe Fedora jisiri ike mejuputa ọtụtụ ndozi nke ha na-ekwu na ị nwere ike ịbawanye ndụ bara uru nke batrị laptọọpụ gị ruo 30%.
Malite na July, ihe nchọgharị Chrome ga-agwa anyị mgbe anyị gara na ebe nrụọrụ weebụ na-adịghị ize ndụ
Malite na June, ihe nchọgharị Google, Chrome, ga-amalite ịgwa ndị ọrụ mgbe ha gara na ebe nrụọrụ weebụ na-enweghị nchebe, ya bụ, HTTP, ya mere ọ naghị ezoro ezo data mgbe ezigara ya na Internetntanetị.
Olee otú igwu egwu mkv faịlụ
The mkv faịlụ ndị kasị mma nhọrọ iji chịkọta dị iche iche ọdịyo, video na sobtaitel formats na a otu faịlụ, ma dị mwute ikwu na ọ bụghị niile na-arụ ọrụ usoro na-enye nwa afọ nkwado. N’isiokwu a anyị gosiri gị otu esi egwu faịlụ mkv na ihe ịchọrọ iji mee ka ọnweghị ihe nkiri nwere ike iguzogide gị.
Opera 51, ihe nchọgharị Opera ọhụụ nwere ọsọ karịa Firefox Quantum
Opera eweputala ụdị nke ihe nchọgharị ya ama ama: Opera 51. versiondị a gụnyere ọtụtụ ndozi na ọkwa dị ka ihe nchọgharị weebụ kachasị ọsọ taa
Microsoft na-egbu Windows 10 S 8 ọnwa ka ahapụchara ya
Onye ibu Redmond n'afọ gara aga bidoro nzọ nke dọtara uche pụrụ iche na nke ndị ...
ChromeOS 64 biara na oganihu ichoro ogologo oge
Google weputara nwelite ohuru na sistemụ arụmọrụ ya. Ọ bụ ChromeOS 64, nke na-enye ọtụtụ ndozi
Otu esi edozi njehie Windows 10 dị oke egwu
Otu nsogbu nke ọtụtụ ndị ọrụ na-ata ahụhụ kwa ụbọchị metụtara njehie dị oke egwu na Windows 10, njehie dị oke egwu nke nwere ngwọta dị mfe dịka anyị na-egosi gị n'isiokwu a. You nwere mperi dị oke egwu na menu mmalite na cortana? Tinye na anyị ga-agwa gị otu esi edozi ya.
Etu esi edozi usoro "com.google.process.gapps akwụsịla" mperi
Ọ bụrụ na ozi ahụ "usoro com.google.process.gapps akwụsịla" pụtara na-aga n'ihu na ngwaọrụ gị, lee usoro iji soro iji dozie ya.
N'ime awa ole na ole Xiaomi doziri nsogbu nke mmelite nke Mi A1
Eziokwu bụ na enwere ekele na ụlọ ọrụ China tinyere batrị a na nke a na ...
Google nwalere Fuchsia OS na Pixelbooks
Google gara n'ihu na-arụ ọrụ na sistemụ arụmọrụ ya ọzọ a maara dị ka Fuchsia OS. O weputala akwukwo nke enwere ike itinye ya na Pixelbooks
Opera 50 ga - agbakwunye nchedo ụmụ amaala na mkpuchi nke cryptocurrency
Iji gbochie ndị enyi ndị ọzọ iji ụfọdụ ndị ọrụ rite uru, Opera ga-ewepụtarịrị mkpọchi mkpuchi na ụdị nke ọzọ
Microsoft wepụrụ ihe nchọgharị Google nke fromlọ Ahịa Microsoft maka ịghara inwe usoro ntụzịaka
Amachibidoro onye na-ebupụta ngwa ahịa Chrome dị na Storelọ Ahịa Microsoft na Microsoftlọ Ahịa Microsoft, na-agabiga iwu ụlọ ahịa ahụ
Chrome 64 ga-ahapụ gị ka ogbi vidiyo na-egwu na-akpaghị aka
Ọhụrụ Chrome 64 mbipute ga-enwe nhọrọ ndị ọrụ chọrọ nke ukwuu: ịnwe ike ogbi vidiyo ndị a na-egwu na-akpaghị aka
Google Maps agaghị ekwe ka ịfere ebe njem ụgbọ njem gị na-abịa n'ihu
Google Maps maka gam akporo na-agbakwunye ọrụ ọhụrụ na-adọrọ mmasị maka ndị na-eji ụgbọ njem ọha na eze kwa ụbọchị. N'oge naanị maka gam akporo
Chrome ga-eme ka anyị mechie ọkpụkpọ vidiyo na-akpaghị aka
Mmelite na-esote nke Chrome ga-enyere anyị aka izere mmezi nke akpaghị aka nke vidiyo, na weebụ anyị chọrọ.
Xiaomi Mi A1 dị ụkọ mana ha amalitela ịnata Android 8.0 Oreo
Ọ dị ka ọ dị iche na ngwaọrụ siri ike inweta ugbua akwadebela ma ọ bụ na-anata mmelite nke ...
Apple nwere ike ikwusa nzụta Shazam taa
Dabere na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke asịrị, taa, a pụrụ ịzụta ọkwa nke ọrụ mmata egwu Shazam nke Apple
Amamịghe echiche na-abịa Photoshop iji wepu nzụlite na foto
Ekele maka ọgụgụ isi, nsụgharị nke Photoshop ọzọ ga-enye anyị ohere ịgbanye ndabere nke isi ihe ahụ n'ụzọ dị mfe.
Pixelmator Pro, ihe ọzọ na Photoshop maka ndị ọrụ Mac, na-akụ ahịa
Versiondị ọkachamara nke Pixelmator Pro na-aghọ ihe ọzọ dị irè karịa maka ndị ọrụ Photoshop ahụ niile.
Android 8.1 Oreo adịworị gọọmentị, anyị na-egosi gị akụkọ niile
Anyị enweela mmelite mbụ nke mbụ nke sistemụ arụmọrụ nke gam akporo 8 Oreo, na nke a ọ bụ ụdị ...
Nsogbu dị na macOS High Sierra na-enye onye nchịkwa ohere ịnweta Mac. Anyị na-egosi gị azịza oge
Achọpụtawo nnukwu nsogbu ikpeazụ na-emetụta sistemụ arụmọrụ na macOS High Sierra ma na-emetụta Apple Macs.
A gam akporo maka PC
Chọpụta nhọrọ kachasị mma iji wụnye gam akporo na PC gị. Anyị na-egosi gị nke bụ ndị kacha mma nhọrọ na emulators na-enwe gam akporo na kọmputa gị
YouTube ga-enye gị ohere ịzụta tiketi egwu
YouTube abanyela nkwado na ikpo okwu Ticketmaster. Site ugbu a gaa n'ihu ọ ga-ekwe omume ịzụta tiketi egwu site na ọrụ ntanetị
Firefox kwantum na-abịa ime ka ị hapụ ihe nchọgharị gị ndị ọzọ
Firefox kwantum bụ ụdị kachasị dị ike nke ihe nchọgharị Mozilla. Ọ dị ọsọ ọsọ, na-erepịa obere RAM karịa Chrome, ma nwee UI ọhụrụ
Ndị editọ foto ntanetị
Ọ bụrụ na anyị chọrọ idezi foto anyị, anyị nwere ike ịchọta ọtụtụ ọrụ na Internetntanetị. Anyị na-egosi gị ndị nke kachasị mma nchịkọta akụkọ ntanetị n'ịntanetị.
Acumos, n'ihi na Isi mmalite ọgụgụ isi nwere ike ime
Nbanye ebe anyị ga-ekwu maka Acumos, sistemụ ọgụgụ isi ọhụrụ mepere emepe Open Source nke Linux Foundation.
Otu onye ọrụ Microsoft wụnye Chrome n'etiti ngosi n'ihi na Edge akwụsịla ịrụ ọrụ
Ọ dị ka Microsoft nwere atụmatụ B maka mgbe Microsoft Edge kwụsịrị ịrụ ọrụ na ngosi: wụnye Google Chrome
Bee vidiyo vidiyo
Tupu ịkesa vidiyo, ị nwere ike belata ha ka ha pere mpe. Anyị na-egosi gị ọrụ kacha mma iji belata vidiyo na ntanetị
Ihe kacha mma free antivirus
Ọ bụrụ na ị na-achọ free antivirus, n'isiokwu a, m ga-egosi gị nke bụ ugbu a kacha mma free antivirus na ahịa.
1Password extension maka Microsoft Edge dị ugbu a
Otu afọ mgbe ọkwa ya gasịrị, ndọtị 1Password maka Microsoft Edge dị ugbu a maka nbudata.
Ngwuputa nke Cryptocurrency, choputa otu esi eme ego igwe ojii
You chọrọ ime ego ego Bitcoins? Ugbu a ọ dị mfe maka ntinye ego cryptocurrency na igwe ojii. Chọpụta otu esi egwu Bitcoin bara uru.
Office 2019 na-abịa n'afọ na-esote iji dochie Office 2016
Microsoft ekwuputala mmalite nke Office 2019, ụdị ọhụrụ nke Office nkịtị maka etiti afọ na-esote
MacOS High Sierra dị ugbu a maka nbudata
Ihe kacha ọhụrụ nke macOS dị ugbu a maka nbudata n'efu site na Mac App Store
Otu esi enyere ntọala ịkekọrịta na Windows 10 nke zoro na ndabara
Taa, anyị gosipụtara gị otu esi enyere ntọala nkesa na Windows 10, nke zoro na ndabara na nke anyị ga-enweta ọtụtụ uru na ya.
BlueBorne, nsogbu nke na-emetụta ihe karịrị 5.000 nde ngwaọrụ n'ụwa niile
Rybanye ebe anyị ga-ekwu maka BlueBorne, nsogbu dị egwu nke usoro Bluetooth ọ bụla na-emetụta ihe karịrị 5.000 nde ngwaọrụ.
Google Chrome ga-akwụsị ịkpọ ọdịnaya na ụda na-akpaghị aka
Google Chrome ga - ekwe ka anyị gbanyụọ ngwa ngwa akpaghị aka nke ọdịnaya nwere ụda na - ewute ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ anyị niile taa.
Mwakpo na EQUIFAX na-ejedebe na izu ohi nke ihe ọmụma bara uru site n'aka ndị ọrụ 143 nde
Otu ìgwè nke hacker jisiri ike zuo ihe na-erughị 143 nde data nkeonwe site n'aka ụlọ ọrụ akwụmụgwọ EQUIFAX, enyemaka nke ASNEFF.
Rụkwaa foto mebiri emebi
Chọpụta ngwa 4 iji rụkwaa foto mebiri emebi ka ị ghara idafu ihe oyiyi ahụ dị mkpa nke oge pụrụ iche. Na-agbake foto mebiri emebi ga-ekwe omume.
Akwụkwọ ndị na-adịbeghị anya na Windows 10
Chọpụta otu ị ga-esi lelee faịlụ ndị na-adịbeghị anya na Windows 10. Ọ bụrụ na ịhapụla usoro nke akwụkwọ ndị na-adịbeghị anya na Windows 10, gụọ nkuzi nkuzi nke a.
Anyị na-achọpụta ndị na-enye onyinye kacha mma ka ị wee nwee ike ịnye ego n'ịntanetị maka aha ma ọ bụ ihe ọ bụla ịchọrọ. Banye ma hazie raffle gị!
Ọkụ ISO na DVD
5 ngwa ọkụ ISO ka DVD ma ọ bụ ndị ọzọ na media dị ka CD-ROM ma ọ bụ Bluray. Ọ bụrụ na ị ga-esure ihe oyiyi ISO na DVD, anyị ga-egosi gị otu esi eme ya.
Akwụkwọ Dropbox na-eme ka ọrụ mmekọrịta na Sketch, folda, na ndị ọzọ dịkwuo mma
Akwụkwọ Dropbox na-eme ka gburugburu ọrụ ọrụ mmekọrịta gị na iwebata atụmatụ ọhụrụ dị ka nchekwa, Archive, Sketch Integration, na ndị ọzọ.
Onye okike graffiti
Want chọrọ ịmepụta graffiti? Ndị a bụ ngwa kacha mma na weebụsaịtị iji mee aha aha ederede. You ma Onye Okike Graffiti? Chọpụta!
Google Chrome ga-enye anyị ohere iwepu ụda site na ibe weebụ ruo mgbe ebighị ebi
Otu n'ime ọrụ kachasị mkpa nke nsụgharị ọzọ nke Chrome ga-enweta dị na nhọrọ iji kpochapụ ụda nke weebụ
Nwere ike ugbu a iji Samsung nchọgharị na "niile" gam akporo smartphones
Samsung mara ọkwa na ihe nchọgharị ịntanetị ya Samsung Internet Browser nwere ike iji ya na ekwentị ọ bụla gam akporo
NASA na-adabere na sistemụ ọgụgụ isi nke Intel iji chọpụta ohere
NASA ka kwuputara nkwekọrịta mmekorita ya na Intel iji jiri usoro ọgụgụ isi ya na nyocha nke data ụlọ ọrụ.
Ugbu a ị nwere ike ị were panoramic na 360º foto na-ahapụghị Facebook
Mmelite ohuru na Facebook nyere ndị ọrụ ohere iwere na ịkekọrịta foto panoramic na 360º na-ahapụghị ngwa mkpanaaka
Gam akporo Oreo: a kwadoro aha ya na ndị a bụ isi akụkọ ya
Google enyefeela ụdị ọhụụ nke sistemụ arụmọrụ ya maka mobiles na mbadamba: Android Oreo or Android 8.0
A ga-egosiputa gam akporo O na August 21
A ga-ekwupụta gam akporo O na August 21. Nke ahụ bụ, ọ ga-ekekọrịta otu ọhụụ na ngụkọta ngwangwa ọzọ
Ebuli Windows 10
Usoro aghụghọ a ga - enyere anyị aka ịkwalite Windows 10 ma mee ka kọmpụta anyị rụọ ọrụ nke ọma, ọsọ ọsọ na - enyeghị anyị ọtụtụ nsogbu.
Ruo 4.000 gam akporo ngwa ọdịnala nwere ike n'iledo na ị
Expertsfọdụ ndị ọkachamara nche achọpụtala na e nwere ihe karịrị 4.000 ngwa gam akporo nke nwere ike inyocha ihe ị na-eji ekwentị gị eme
Etu esi wụnye mkpọ asụsụ na Windows
Ebee ka ibudata asụsụ Spanish na Windows 7 ma ọ bụ Windows 10? Chọpụta aghụghọ iji wụnye ma ọ bụ wepu mkpọ asụsụ na Windows
Ihe nlele foto Windows 10
Windows 10 Photo Viewer na-abụkarị ihe na-agwụ ike ma dị nwayọ. Ọ bụ ya mere anyị ji egosi gị otu ị ga-esi laghachi na Windows Image Viewer na Windows 10.
Olee otú Download YouTube Music na VidToMp3
Anyị na-egosi gị otu esi eji VidtoMP3 na nhọrọ ndị ọzọ iji budata egwu n'efu, vidiyo na egwu na YouTube na usoro MP3.
Ọcha na adị ọrụ nke PC gị na Nero TuneItUp
Site na ngwanrọ Nero TuneItPro, anyị nwere ike melite arụmọrụ nke PC anyị na obere sekọnd.
WhatsApp ga - eme ka ndetu olu dị mma, ị ga - enwekwu oge ndekọ
Mmelite WhatsApp na-adịkarị. Nke ikpeazu metụtara otu n’ime ọrụ ndị ama ama n’ozi a: ozi ọdịyo
Gịnị bụ onodu menu? Ọ bụrụ na ịmara otu esi edozi menu ihe dị na Windows, ị ga-echekwa ọtụtụ oge iji kọmputa gị rụọ ọrụ. Anyị na-egosi gị otu esi eji ya.
N'ihi ọrụ ọhụrụ Mozilla, anyị nwere ike izipu faịlụ ruru 1 GB na ntukwasi-obi
Ekele Zipu, anyị nwere ike izipu faịlụ ruru 1 GB na nha n'ụzọ zuru oke ma na njedebe
OffLiberty, budata vidiyo ogologo na youtube
OffLiberty bụ ngwa weebụ na-akwụghị ụgwọ nke na-enye anyị ohere ibudata vidiyo na egwu sitere na YouTube na PC anyị, ekwentị mkpanaaka ma ọ bụ mbadamba na usoro MP4 na MP3
Kedu ka m si mara ihe draịvụ ike m nwere?
Chọpụta otu esi ama draịva m nwere na kọmputa m site na iji aghụghọ dị mfe ma ọ bụ ọtụtụ ngwaọrụ n'efu. Kedu ụdị HDD ma ọ bụ SSD ị nwere? Chọpụta ya!
Gbochie Channels YouTube
Ọ bụrụ n'ịchọrọ igbochi ọwa YouTube, jiri ntakịrị aghụghọ anyị ga-enwe ike igbochi vidiyo nke ọwa YouTube ị masịghị.
Android 8.0 Octopus?
Akwa a na - ezobe n’ime ya n’ime beta anọ nke gam akporo 8.0 eweputala mkpu: Octopus ọ ga - abụ aha enyere ụdị ọhụrụ a?
WhatsApp nwere ndekọ ọhụrụ: 1.000 ijeri ndị ọrụ kwa ụbọchị
WhatsApp bụ ngwa ngwa ozi ngwa ngwa kachasị ewu ewu n'ụwa. Ọnụ ọgụgụ ha nyere site na blọgụ gọọmentị ha kwadoro ya.
Etu esi eji mkpu na Wake-Windows 10
Windows 10 nwere oti mkpu, elekere mkpuchi na oge na-eji atụmatụ eme ihe iji dochie nke ngwaọrụ mkpanaka. Anyị na-egosi gị otu esi eji ha
Google choro idozi nsogbu nile nke ngwakọta nuklia
Google ka kwuputara njikọ ya na ụlọ ọrụ Tri Alpha Energy iji mepụta usoro nwere ike idozi nsogbu nke njikọta nuklia
Kaspersky na-ebupụta antivirus n'efu maka Windows
Kaspersky Lab na-ebupụta antivirus a na - akwụghị ụgwọ maka Windows akpọrọ Kaspersky Lab, kedụ ihe ọ mejupụtara na gịnị kpatara na ọ na - agbapụta ugbu a?
Azịza Gmail Smart dị ugbu a na Spanish
Azịza Gmail Smart adịghịzi naanị na Bekee, mana ndị mmepe agbakwunyela asụsụ ọhụrụ: Spanish.
Nke a bụ ụzọ dị ọnụ ala iji nyochaa ekwentị gị na ekwentị gị
Ntinye ebe anyị ga-ekwu maka usoro dị mfe iji mejuputa usoro iji jikwaa nyochaa ụlọ gị n'oge ezumike ọkọchị.
Ndị a bụ ọrụ na ngwa ga-apụ n'anya na mmelite na-esote nke Windows 10
Microsoft ka kwuputara site na ya blog nke ga-abụ ọrụ na ngwa na-agakwaghị anọ na Windows version ọzọ
Deseat.me, hichapụ email gị nke ndenye aha ndị obi ụtọ
You bụ otu n'ime ndị debanyere aha maka ọtụtụ ọrụ wee chọta igbe mbata gị jupụtara na Spam? Na Deseat.me ị nwere ngwọta
Atomian, nke ahụ bụ aha Nnukwu Nwanna nke FC Barcelona na-eji
FC Barcelona chọrọ nnukwu njikwa nke data niile ọ na - ewepụta. Atomian na-ahụ maka ịbụ nnukwu nwanne ya
CCleaner gbanwere nwe ma bụrụ akụkụ nke Avast
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, anyị ahụla ka ụlọ ọrụ ngwanrọ ọhụrụ si nweta oghere dị mkpa na ...
Esi lelee okwuntughe zoro ezo n'azụ akara ngosi
Obere aghụghọ anyị ga-enwe ohere ịhụ okwuntughe zoro ezo n'azụ akara mmuke. Ọ bụrụ n’ichetaghị ngafe, ọ bụ otu ahụ ka ị ga - esi hụ ya.
Amazon na-arụ ọrụ na ya ngwa izi ozi ngwa
Amazon ga-arụ ọrụ na ngwa izipu ozi ya nke a na - akpọ Oge obula nke ga - eweta ọrụ ọhụrụ yana ijikọ aka na ngwaahịa ndị ọzọ
Ndị na-arụ ọrụ okwu ntanetị
Chọrọ iji Okwu online na n'efu? Echefula nhọpụta nke ndị na - arụ ọrụ okwu ntanetị n'ịntanetị kacha mma iji dezie akwụkwọ.
Google bupụtara ngwa iji mepụta otu draịvụ ike anyị na draịva
Google amalitela ngwa ohuru iji chekwaa ụdị faịlụ ọ bụla na kọmputa anyị na Google Drive.
Google gosiputara anyi ihe nke egosiputara site na ọgụgụ isi ya na ntinye foto
Ntinye ebe anyị ga-ekwu maka nnukwu ọrụ ikpeazụ Google mere, ọgụgụ isi nwere ike idezi foto na ogo ọkachamara.
Free video nchịkọta akụkọ
Echefula ndị editọ vidiyo kacha mma ị nwere ike ibudata maka Windows, Mac ma ọ bụ Linux. Ọ bụrụ n'ịchọrọ onye editọ vidiyo, ị ga-ahụ ya ebe a.
Ka ọ dị Windows Phone 8.1
Microsoft kwụsịrị ịkwụsị nkwado maka Windows Phone 8.1, yabụ ndị ọrụ agaghịzi enweta mmelite ọ bụla
Ubuntu di ugbu a maka nbudata na Storelọ Ahịa Windows
Ubuntu dị ugbu a maka nbudata n'efu na Storelọ Ahịa Windows na n'isiokwu a anyị ga-agwa gị otu esi etinye ya.
Snapchat gara n'ihu na-eme mgbanwe
Snapchat weputara nwelite ohuru nke juputara na ozi: kerita njikọ ndi ozo, gbanwee olu gi ma gbanwee okirikiri
Instagram ugbu a na-enye ohere igbochi okwu na spam
Instagram ka weputara mmelite ohuru ebe ndi oru gha enwe ike igbochi ozi ojoo na obuna spam.
Esi gbanyụọ mmelite na-akpaghị aka na windo 10
Nke a bụ otu esi gbanyụọ mmelite na-akpaghị aka na Windows 10. Gbochie PC gị ka ọ ghara imelite na-akpaghị aka n'ụzọ na-enweghị nsogbu na usoro ndị a.
Etu ị ga-esi nwetaghachi data gị niile furu efu na iPhone na iPad
MobiSaver bụ sọftụwia ọkachamara na - enye gị ohere iji weghachite data furu efu ma ọ bụ ehichapụ site na iPhone ma ọ bụ iPad, ma ọ bụ site na nkwado ndabere na iCloud ma ọ bụ iTunes
DMZ, ozi niile ịchọrọ iji mepụta nke gị demilitarized mpaghara
Chọpụta ihe ndị ọbịa DMZ bụ, otu esi ahazi ya na ihe nhọrọ DMZ dị na ndị njem niile na ahịa bụ. Ọ na - eme ka njikọ dị na egwuregwu vidiyo ka mma?
Facebook ga-amalite ngwa ọhụrụ iji mepụta ọdịnaya vidiyo
Guysmụ okorobịa nọ na Mark Zuckerberg ekwuputala mmalite nke nchịkọta akụkọ vidiyo maka ndị na-emepụta ọdịnaya site na njedebe nke afọ.
The leaked Windows 10 isi koodu bụ ezigbo dị ka enen Microsoft
Microsoft enweghị ụzọ ọzọ ma ọ bụ iji kwado ihe bụ ihe nzuzo, ihe nzuzo nke Windows 10 bụ eziokwu.
Bọọ kacha mma maka Telegram
Chọpụta bọọlụ kachasị mma maka Telegram. Anyị na-akọwa ihe bot bụ, ihe ọ bụ maka ya na etu esi ahazi ya iji nweta ọtụtụ ihe na Telegram.
Spotify na-ebupụta ndepụta ọkpụkpọ otu na ndọtị ya maka ozi
Site na ọrụ Spotify ọhụrụ, ịnwere ike ịmepụta listi ọkpụkpọ ma ọ bụ listi ọkpụkpọ nke ndị enyi Facebook gị nwekwara ike isonye.
Etu ị ga - esi mee ka atụmatụ dị ọtụtụ na Firefox 54
A naghị arụ ọrụ multiprocessing na arụ ọrụ nwa afọ ozugbo anyị melite na Firefox 54. Anyị na-egosi gị otu esi eme ya.
Nsogbu mgbe ị na-egwu n'ịntanetị? Eleghi anya ịlele PING njikọ gị ga-enyere gị aka
Banye ebe anyị ga-ekwu maka ụzọ dị iche iche iji melite ping nke kọmpụta anyị iji kwụsị nhụjuanya site na nwayọ mgbe ị na-egwu n'ịntanetị.
Facebook na-eju anya na nsonaazụ a na-atụghị anya ya nke usoro ọgụgụ isi ya
Enwere ọtụtụ ihe onwunwe ma ọ bụ oge, yana ihe niile nke a gụnyere, ọkachasị n'ihe gbasara ụgwọ, ...
Ndọtị kachasị mma na mgbakwunye maka Firefox
Chọpụta ndọtị na mgbakwunye kacha mma maka Firefox, otu n'ime ihe nchọgharị kachasị mma na ahịa ị nwere ike melite na ọtụtụ mgbakwunye.
Ndọtị kachasị mma maka Chrome
Na Storelọ Ahịa Chrome anyị nwere ike ịchọta ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndọtị iji hazie ojiji nke Chrome. Anyị na-egosi gị ndị kacha mma dị.
Otu esi belata mkpọtụ ma melite mkpebi nke foto site na iji ngwaọrụ dị n'ịntanetị
Chọpụta ụzọ dị mfe iji melite mkpebi nke foto gị ma belata mkpọtụ na ntanetị na enweghị mkpa maka mmemme dị mgbagwoju anya dị ka Photoshop.
Moodnotes, ngwa ahụike uche sitere n'aka ndị okike nke Ncheta Ndagwurugwu
Moodnotes bụ ngwa nke isi nke Monumento Valley na ndị ọkachamara abụọ na-enyere anyị aka melite ahụike ọgụgụ isi anyị.
Akụkọ niile dị na iOS 11, tvOS 11, watchOS 4 na macOS High Sierra
Anyị na-egosi gị ozi niile na Apple sistemụ arụmọrụ ga-abata na nke ikpeazụ ha site na Septemba
Na iOS 11, iPad na - ewe nnukwu mmiri maka imepụta ihe
IPad ugbua enwetala nnukwu mmụba ọ na-aga n'ihu na arụpụta ọrụ n'ihi iOS 11 na nnukwu ozi ọma ya: Faịlụ, Ihe Ntinye ngwa, Dọkpụrụ na Drop na ndị ọzọ
Microsoft kwuwapụtara iTunes na-abịa na Windowslọ Ahịa Windows N'oge na-adịghị anya
Microsoft kwupụtara na Mee 2017 na iTunes ga-adị maka nbudata n'oge na-adịghị anya na Windows 10 Windows Store.
Satya Nadella kwadoro na Windows 10 arụnyere na ngwaọrụ 500 nde
Windows 10 adịworị na 500 nde ngwaọrụ ma ọ bụ ihe bụ otu ihe ahụ dị ka Microsoft dị anya site na iru ihe mgbaru ọsọ mbụ ya.
Ngwa 7 ị na-amata mgbe ị dọwara
Ọ bụrụ na ị bụ otu n’ime ndị na-echefu ịmara ebe ị dọwara, anyị na-egosi gị ngwa 7 iji dozie nsogbu a
Youtube enweela ọnọdụ gbara ọchịchịrị na nhọrọ nhọrọ nhazi ndị ọzọ dị
Enwere ike iji YouTube mee ihe ọhụụ maka izu ole na ole ma ị nwere ike ime ya ozugbo na weebụ ...
Esi emeghe faịlụ PDF
Unkpọghe faịlụ na PDF bụ usoro dị mfe ma ọ ga-ewe naanị nkeji ole na ole iji soro otu n'ime usoro anyị na-akwado.
Etu esi gbanyụọ Cortana na usoro 3
Gbanyụọ Cortana, onye enyemaka nke Microsoft, na usoro atọ dị mfe ugbu a yana n'ụzọ dị mfe.
Ihe nchọgharị kacha mma maka Windows
Anyị na-egosi gị ndepụta nke ihe nchọgharị kacha mma maka Windows, nke anyị nwere ike ibudata, wụnye ma nwee ọ quicklyụ na Windows PC gị
WhatsApp emelitere na iOS ikwe ka Siri gụọ ozi
IOS ọrụ na-enwe ihu ọma ma ọ bụrụ na ha na-eji Siri na quintessential ozi ngwa, WhatsApp. Oge nke a ...
7 aghụghọ na-uru nke zoro ezo Netflix Koodu na menus
Rybanye ebe anyị ga-ekwu maka ọtụtụ 'aghụghọ' ndị kachasị adọrọ mmasị ị nwere ike ịnwe dịka onye ọrụ edebanyere aha ya na ikpo okwu Netflix.
Ihe nchọgharị kacha mma maka Mac
Ndị a bụ ndị kasị mma nchọgharị maka Mac na ị nwere ike ibudata, wụnye na-enwe ugbu a na gị na kọmputa Apple.
Chrome nwere ike iwekota onye na-egbochi mgbasa ozi na ụdị ya niile
Dabere na isi mmalite ndị metụtara Chrome, Google nwere ike iwekọta ihe nkwụchi mgbasa ozi na nsụgharị ndị ọzọ nke Chrome
Snapchat nwara iji ihe nzacha eziokwu dịwanye elu
Snapchat na-akpọsa akụkọ n'elu ikpo okwu ya, gụnyere nbata nke nzacha ọhụụ dị elu dabere na eziokwu dịwanye elu.
Nchere ahụ na-abịa na njedebe, Amazon Pay mechara rute Spain
Mgbe ogologo ichere anyị nwere ike akpatre gwa ya na Amazon ugwo ke akpatre ke Spain.
Ihe ohuru nke Google Earth di ugbu a
O doro anya na ihe karịrị otu n'ime ndị nọ ebe a na-eji ma ọ bụ jiri Google Earth eme ihe ọ bụla, n'ihi na nnukwu ngwaọrụ a ...
Esi rụọ ọrụ Windows 10
Anyị na-egosi gị ihe niile ịchọrọ ịma iji nwee ike rụọ ọrụ Windows 10 n'ụzọ ziri ezi
Olee mmepụta oyiri a draịvụ ike na mfe na ngwa ngwa
I kwesịrị mmepụta oyiri kọmputa gị na draịvụ ike, echegbula, taa anyị ga-akọwa otú ime ya ọsọ ọsọ na mfe.
Kalinda Google na Mmekọrịta kọntaktị Outlook na-aga n'ihu na-anwale na macOS
Kalịnda Google na Mmekọrịta kọntaktị Outlook na-enweta usoro mmelite site na Microsoft maka ndị ọrụ nke ...
Microsoft anaghịzi enye nkwado maka Windows Vista
Ọfọn, ọ bụ ezie na akụkọ ahụ na-ekwuwapụta ogologo oge na Microsoft ga-akwụsị ịkwado sistemụ arụmọrụ ...
Etu esi agbanye foto n'ime eserese
Tụgharị foto anyị n'ime eserese bụ usoro dị mfe maka ekele maka ọtụtụ ngwa ndị dị maka sistemụ arụmọrụ ọ bụla.
Etu esi ewepu Windows 10, 8.1 na 7 n'ụdị ISO
Taa, anyị gosipụtara gị otu esi ebudata Windows 10, 8.1 na 7 n'efu na usoro ISO, iji mee ka ị pụọ n'ọtụtụ nsogbu ma chekwaa gị ezigbo ego.
Etu ị ga-esi chekwaa ebe ebe ị na - adọba ụgbọala na Google Maps
Banye ebe anyị ga-ekpughe ihe ngwọta dị mfe iji nwee ike ịchekwa ọnọdụ nke ụgbọ ala anyị na Google Maps.
Ntughari ohuru nke Twitter biara, Twitter Lite nke na-enye anyị ohere ịchekwa data
Ọ bụrụ na enwere netwọkụ mmekọrịta nke masịrị m, ọ bụ Twitter. Ọ bụ eziokwu na ọ nwere nkọwa ụfọdụ ga - enwe ...
Etu esi ewepu mgbasa ozi na Windows 10
N'ihi obere faịlụ a na-agbanwe ndekọ ahụ, anyị nwere ike ịkwụsị mgbasa ozi niile Windows 10 na-egosi anyị
A na-emelite Apple Music maka gam akporo na interface yiri nke iOS
Mgbe a manyere onye ọrụ iOS 10 iji ihe njedebe gam akporo, ma chọọ ...
Google weputara Android 7.1.2 maka Nexus na Google Pixel
Versiondị ọhụrụ nke gam akporo 7.1.2 amaliteworị iru ngwaọrụ Google Nexus na Google Pixel. Nke a…
Enwere ike izipu ekpomeekpo n'ịntanetị? Ndị ọrụ nyochalarịrị ọrụ na ya
Otu ìgwè ndị nyocha si Mahadum Singapore jisiri ike chepụta ụzọ iji zipu ihe ụtọ na ịntanetị.
Telegram emelitere iji tinye oku
Telegram bụ doro anya na izi ozi ngwa na ụfọdụ ụzọ chere na-ewu ewu WhatsApp. Nke a…
NASA juru anyị anya site n’ọbá akwụkwọ jupụtara na ụda, foto na vidiyo site na mbara igwe
NASA juru anyị anya site na mwepụta nke igwe nchọgharị ọhụụ emere maka inye onyonyo, vidiyo na olu si na mbara igwe.
WhatsApp na-ebelata oge ihichapụ ozi na nkeji abụọ
Inwe ike ihichapụ ozi na WhatsApp bụ n'ezie otu n'ime akụkọ kachasị atụ anya nke ụfọdụ ndị ọrụ ...
Microsoft na-eche ikpe ọhụrụ maka imelite kọmputa na-enweghị ikike
Guysmụ okorobịa si Redmond na-eche ihu ọhụrụ site n'aka ndị ọrụ maka mmelite akpaka na Windows 10
Microsoft na-ewepu Docs.com mgbe njehie dị oke njọ
Otu izu ụka a Microsoft kpebiri iwepụ Docs.com mgbe ọ gosipụtara na njin nchọta ahụ awụpụla nde data nzuzo.
Spotify kwuputara nzụta nke MightyTV
Spotify ka kwuputara nke oma mgbe o kwusiri izuta MightyTV, ihe nlere ihe nlere nke ihe nlere anya nke ihe nlere.
Atụmatụ 10 dị mkpa iji mepụta mkpokọta na WordPress
Ntụziaka bụ isi nke 10 mgbe ị na-edebe weebụsaịtị na WordPress. Ọ bụrụ na ị ga-eji WordPress, ị gaghị echefu ịgbaso ndụmọdụ ndị a n'otu n'otu.
WhatsApp ga-agwa ndị kọntaktị gị na akpaghị aka na ị gbanweela nọmba ekwentị gị
WhatsApp amalitela ọrụ nke na-eme ka ndị kọntaktị anyị mara banyere mgbanwe na nọmba ekwentị.
Nwelite Instagram na nche
A ga-emelite Instagram site na nchebe abụọ ọhụụ, otu maka asambodo akaụntụ yana nke ọzọ maka ihe dị nro.
Enwere ike ịhụ ọhụụ ọhụụ na weebụsaịtị Emojipedia
Ma na emoji bụ akụkụ nke okwu anyị site na ngwa izipu ozi ma ndị a na-agbakwunye ma gbanwee ihe ndị a ...
Apple mara ọkwa nzụta Workflow
Ma ndị na-ahụ maka mmepe nke ngwa ọrụ yana Apple n'onwe ya gosipụtara nnweta nke Apple.
Obere vidiyo, Apple na-ama maka ngwa dị ka Instagram na Snapchat
Apple gosipụtara Clips, netwọkụ ọhụụ ọhụrụ nke ga-asọ mpi, bido n’ọnwa na-abịa, ya na ndị ọzọ dịka Instagram ma ọ bụ Snapchat.
WhatsApp na ederede ederede ya dị ugbu a na gam akporo ọzọ
Izu a gara aga, amalitela ọzọ nke ọnọdụ nke ngwa WhatsApp n'ụdị ederede, yana ...
Chrome jiri nlezianya melite nhazi ihe oyiyi 3D
Na mmelite Google Chrome kachasị ọhụrụ, nkwado maka webGL 2.0 agbakwunyere iji meziwanye ọgwụgwọ nke onyonyo 3D.
JPEG faịlụ ugbu a ga-abụ 35% Mkpa ọkụ ekele a Google software
Otu ìgwè ndị na-eme nchọpụta sitere na Google ewepụtala algorithm ọhụrụ nke nwere ike ibelata ogo nke onyogho JPEG ma na-abawanye ogo ha.
Gmail na - enye gị ohere igwu vidiyo n’enweghị budata ha
Google ka kwuputara mmelite ohuru maka Gmail ebe ị nwere ike ile vidio ugbu a na-enweghị ibudata ha.
Nwere ike ugbu a iji Alexa dị ka a virtual nnyemaaka na gị iPhone
Na mmelite kachasị ọhụrụ nke ngwa Amazon maka ngwaọrụ iOS, agbakwunyere ohere iji Alexa dị ka onye enyemaka na-akwadoghị.
WhatsApp laghachiri ma nye ndị ọrụ ohere itinye ederede ederede
WhatsApp backtracks ma kpebie ikwe ka ndị ọrụ niile nke izi ozi ngwa ngwa nwee ike ide ederede.
Gmail na-enye gị ohere izipu ego site na ikpo okwu ya
Na mmechi, Google ka kwuputara na Wallet na eze abiala na Android, nke ga eme ka ojiji ya di nfe.
Skype maka macOS ugbu a dakọtara na Ogwe aka nke MacBook Pro ọhụrụ
Mmelite kachasị ọhụrụ nke ngwa Microsoft Skype, iji kpọọ oku na oku vidiyo, na-eme ka ọ kwekọọ na Touch Bar
Ndị a bụ ozi ọma na redesign nke Google Hangouts
Google amaghi nke oma ihe o ga eme Google Hangouts, na ntoputa a o di ka ha choro ilekwasi anya na ojiji ya na ahia.
DeepCoder nweziri ike ịmepụta mmemme na ngwa nke aka ya
Kwa ụbọchị, a na-ewepụta azịza ọhụụ ọhụụ dị ịtụnanya nke ndị okike ha chọrọ iji mee ndụ anyị ntakịrị ...
Ihe odide Chrome nke 57 dị ugbu a maka nbudata
Google ka weputara mmelite ohuru Chrome, nọmba 57, nke na-egbochi ịnweta plugins.
Google jisiri ike melite onye ntụgharị okwu ya site na iji ọgụgụ isi
Google mara ọkwa na ndị injinia ya etinyela asụsụ atọ ọhụrụ na nyiwe ntụgharị asụsụ AI.
Etu esi tinye egwuregwu nke gị na NES Classic Mini
Ugbu a, anyị anwalela ya ma anyị achọpụta na ọ dị mfe ma kwado ka ị nye njikwa a ndụ nke abụọ.
Ndị a bụ akụkọ ozi WhatsApp ga-ewepụta na mmelite ya na-esote
WhatsApp enweela mmelite ọhụrụ dị njikere maka ngwa a maara nke ọma na ọtụtụ ọrụ ọhụụ, nke, ọ dịkarịa ala otu, ị gaghị achọ.
Amazon ga-ewepụta ozi ọ bụla ọ nwere ma ọ bụrụ na ọ nwere ike inye aka dozie mpụ
Mgbe arịrịọ nke onye ọrụ nke nwere Amazon Echo, ụlọ ọrụ ahụ ga-ahapụ data niile nke onye enyemaka na-akwado ya.
N'oge na-adịghị anya, anyị ga-ehichapụ ozi ezitere na WhatsApp
Mgbe ị natara ozi nke ọnọdụ WhatsApp izu ole na ole gara aga, ugbu a anyị nwere nso karịa ...
N'ihi Google Photos ọ dịla mfe idozi agba nke foto gị
A gbanwere foto Google ka ị gbakwunye ọrụ ndị ọzọ nwere ike ime ka foto gị pụta ìhè na ederede ziri ezi.
Google Assistant kwupụtara maka ngwaọrụ gam akporo niile
Nke a bụ vidiyo nke ụlọ ọrụ ahụ ji aka ya wepụtara onye enyemaka ya maka ngwaọrụ niile na ...
A isi nchekwa oghom chọpụtara na Slack
A na-enye onye ọkachamara nchekwa ihe $ 3.000 maka ịchọpụta nsogbu nchebe dị ukwuu na slack platform na-ewu ewu.
CloudFlare kwara data nkeonwe site na 1Password, Fitbit na Uber ruo onwa
CloudFlare kwenyere na ruo ọtụtụ ọnwa ọ nwere azụmahịa azụmaahịa na data njirimara gosipụtara na ịntanetị niile.
Mgbasa ozi mechara mee ya na vidiyo Facebook
Facebook ga - emesị nyefee 55% nke ego enwetara site na itinye mgbasa ozi na vidiyo na ndị dere otu.
Remix Singularity ga-enyere gị aka ịtụgharị gam akporo gị mobile ka PC zuru ezu
Jide Technology na-egosi Remix Singularity, ụzọ dị mfe iji tụgharịa ekwentị mkpanaaka gị na kọmpụta zuru oke ma rụọ ọrụ.
Google ga-ekwe ka sistemụ ọgụgụ isi ya mezie ụdị weebụsaịtị ọ bụla
Google mara ọkwa na akụkụ nke ndị injinia ya na-arụ ọrụ na usoro ọgụgụ isi ọhụrụ nke nwere ike ịchọpụta okwu ọjọọ.
Microsoft na-ekwuwapụta mbata nke mmelite dị elu maka Windows 10 na ngwụcha 2017
N'oge ogbako ikpeazụ nke Microsoft mere, anyị chọpụtara na ụlọ ọrụ ahụ na-ezube ịmepụta mmelite ọhụrụ maka Windows 10 2017 a.
Ọnọdụ WhatsApp adịworị na Spain
N'ụtụtụ a, anyị kwuru maka ọrụ ọhụụ nke ngwa izipu ozi WhatsApp ezubere ịmalite na ihe ndị a ...